डोरबहादुरको उपचारमा कमी हुन नदिन सांसदहरुको अस्पताललाई निर्देशन - Sabal Post
डोरबहादुरको उपचारमा कमी हुन नदिन सांसदहरुको अस्पताललाई निर्देशन
विगत १६ दिनदेखी भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (युसीएमएस) शिक्षण अस्पतालको आइसीयु कक्षको १ नम्बर बेडमा भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार गराईरहेका प्युठान स्वर्गद्धारी नगरपालिका वडा नम्बर ४ गोठीबांगका ४१ वर्षिय डोरबहादुर थापा क्षेत्रीको उपचारमा कुनै कमि हुन नदिन सांसदहरुले अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन् ।
आर्थिक अभावका कारण उपचारमा कठिनाई भएको खबर थाहापाएपछि उनको वस्तुस्थिति बुझ्न अस्पतालमै पुगेर विरामी, उनका आफन्त र अस्पताल प्रशासनलाई भेटेकोे प्युठानबाट प्रदेश सभाकालागी निर्वाचित सांसद हरि रिजालले जनाए । उनले भने ‘हामीले डोरबहादुरको स्वास्थ्य अवस्था, उहाको घरायासी अवस्थाको सत्यतथ्य बुझ्यौं । उहांहरुसंग अब विक्री वितरण गर्ने सम्पति पनि केही छैन, भएजत्तिको बेचेर अस्पताललाई बुझाउनु भएछ । उहांहरुसंग पैसा पनि छैन । तथापी जसरी पनि मान्छे बचाउनुपर्दछ भनेर हामी अस्पताल प्रशासनलाई उपचारमा कुनै कमि नराख्न निर्देशन दिएका छौं । ’
प्युठान रुपन्देही सम्पर्क मन्चको पहलमा सांसद रिजाल संगै , प्युठानबाटै निवाचित सांसद तारा जिसी र भैरहवा क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सन्तोष पाण्डे सहितको टोलीले डोरबहादुरको स्वास्थ्य उपचारको विषयमा अस्पतालमै पुगी चासो व्यक्त गरेको हो ।
उनीहरुले डोरबहादुरको श्रीमतिलाई समेत सान्तनवा दिदैं भनेका छन् , ‘तपाई चिन्ता नगर्नुस् । जत्ति खर्च लागे पनि उनको उपचार गरेर स्वस्थ बनाएर हामी घर पठाउने व्यवस्था मिलाउछौं । ’
सांसदहरुको सान्तनवा पछि डोरबहादुरको श्रीमति बिजुला थापाले भनिन, ‘रोटयाक्ट क्लब अफ भैरहवाको सहयोगमा हामी बसेका थियौं अब आफैले मत दिएर जितेका नेता आएपछि उहा बाच्ने आशा झनै बढेर गएको छ । ’
सांसदहरुले अस्पतालका प्रमुख अजय कुमारलाई भेटी डोरबहादुरको उपचारमा आर्थिकको कारणले कुनै कमि नराख्न आग्रह गरको छन् । उनको आग्रहलाई स्वीकार्दै प्रमुख अजय कुमारले भने , ‘हामी डोरबहादुरको उपचारमा कुनै कमि राख्दैनौं । सांसदहरुले पनि चासो दिनु भएको छ । ’
सांसदहरुसंगै प्युठान रुपन्देही सम्पर्क मन्चका अध्यक्ष पदम जिसी सहितको प्युठानीहरुको टोली, रोटयाक्ट क्लब अफ भैरहवाका अध्यक्ष माधब न्यौपाने सहितको टोलीले डोरबहादुरलाई भेट्दा उनको अवस्था सुधारोन्मुख भएको प्युठान रुपन्देही सम्पर्क मन्चका सचिव श्याम पोखरेलले जनाए ।
निम्न वर्गिय थापा क्षेत्री आपको रुखबाट लडेर गम्भिर घाईते भई उपचारकोलागी श्रीमतिसंगै भैरहवा आएका हुन् । उपचाररत थापा क्षेत्रीका १० वर्षिय एक छोरा अपांग छन् । अर्को ८ वर्षिय छोरी घरमै छन् । थापा क्षेत्रीको स्वास्थय उपचारमा खटिएका न्यूरोसर्जन डा. राजकुमार के.सीका अनुसार उनको घाटीको हड्डी भाचिंएको थियो । भाचिएको हड्डीको अप्रेशन भइसकेको छ । तर श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकोले भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको उनले बताए । उनलाई धेरै दिन आइसीयुमा राख्नुपर्ने डा. को भनाई छ ।
उपचारको क्रममा घरखेत समेत बेच्दा नपुगेपछि डोरबहादुरको उपचारमा समस्या सृजना भएको थियो । अहिले सम्म साढे ४ लाख भन्दा बढी खर्च भएको छ । पछिल्लो समय भैरहवा क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले चन्दा उठाएर डोरबहादुरको उपचार गराईरहेका छन् ।
जेसीआइ बुटवल एकाडेमी शुरु, पब्लिक स्पिकर बुटवल—२०१८…
नायिका सुस्मिता सेन प्रेम चर्चामा
सांसद भागवत प्रकाश मल्लले भने : कालीगण्डकी…